ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ - အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ
အားလုံး 8 ရလဒ်များကိုဖေါ်ပြသည်
CAD-031 အမှုန့် (2071209-49-7)
CMS121 အမှုန့် (1353224-53-9)
Hydroxypinacolone Retinoate အမှုန့်
J147 အမှုန့် (1146963-51-0)
Monosialotetrahexosyl ganglioside ဆိုဒီယမ် (GM1) အမှုန့် (ဝက် ဦး နှောက်) (37758-47-7)
အယ်ဇိုင်းမားရောဂါသည်တိုးတက်သောစိတ်ဖောက်ပြန်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ စိတ်ရောဂါသည် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့) မှတ်ဉာဏ်၊ ဒီအပြောင်းအလဲတွေကနေ့စဉ်လူနေမှုဘ ၀ ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်တယ်။
အယ်လ်ဇိုင်းမားအစည်းအရုံး၏အဆိုအရအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသည်စိတ်ဖောက်ပြန်မှု ၆၀ မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ရောဂါရှိသူအများစုသည်အသက် ၆၅ နှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ၎င်းကိုမတိုင်မီရောဂါရှိပါက၎င်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်အစောပိုင်းကစတင်ခဲ့သည့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဟုရည်ညွှန်းသည်။
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုမသိရသေးပါ။ အဆိုပါ "amyloid ကက်စကိတ်အယူအဆ" အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏အကြောင်းရင်းနှင့်ပတ်သက်။ အကျယ်ပြန့်ဆုံးဆွေးနွေးနှင့်သုတေသနပြုအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ amyloid အဆငျ့ဆငျ့အယူအဆကိုထောက်ခံအပြင်းထန်ဆုံးဒေတာအစောပိုင်း - စတင်ခြင်းအမွေဆက်ခံ (မျိုးဗီဇ) အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏လေ့လာမှုကနေလာပါတယ်။ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်ဆက်နွှယ်သောဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိုအစောပိုင်းစတင်ရောဂါရှိသည့်လူနာတစ်ဝက်ခန့်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤလူနာအားလုံး၌ mutation သည် ABeta (Aβ) ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းအပိုင်းအစငယ်တစ်ခု၏ ဦး နှောက်တွင်ထုတ်လုပ်မှုပိုများစေသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်အများအပြားကကြိုကြားကြိုကြား (ဥပမာ - အမွေဆက်ခံခြင်းမရှိသော) အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါများ (ဤရောဂါများအားလုံးသည်အယ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ပွားမှုအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်သည်) သည်ဤAβပရိုတိန်းကိုထုတ်လုပ်မှုအလွန်အကျွံထက်အနည်းငယ်မျှသာဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်နှေးကွေးစေရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရာတွင်သုတေသနအများစုသည် ဦး နှောက်ထဲတွင်Aβပမာဏကိုလျော့ချရန်နည်းလမ်းများကိုအာရုံစိုက်ထားသည်။
လူတိုင်းတွင်အခါအားလျော်စွာမေ့လျော့ခြင်း၏အဖြစ်အပျက်များရှိသည်။ သို့သော်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရှိသူများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုဆိုးရွားလာသည့်အပြုအမူများနှင့်လက္ခဏာများကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်ပါဝင်နိုင်သည် -
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသမှုတွင်ဆေးဝါးအခြေခံခြင်းနှင့်ဆေးဝါးမဟုတ်သောအခြေပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဆေးဝါးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကုသရန် FDA မှအတည်ပြုခဲ့သည် - cholinesterase inhibitors နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း glutamate ရန်။ မည်သည့်ဆေးဝါးအမျိုးအစားကမျှအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုနှေးကွေးစေခြင်းမရှိသေးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအရ၎င်းဆေးများသည်အချို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသောဆေးများသည်အရွက် (သကြားဆေးပြား) ထက်သာလွန်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
olin Cholinesterase inhibitors (ChEIs) များ၊
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရှိသူများတွင် acetylcholine ဟုခေါ်သော ဦး နှောက်တွင်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ neurotransmitter မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်အရ acetylcholine သည်မှတ်ဥာဏ်အသစ်များဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွင်အရေးကြီးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ cholinesterase inhibitors (ChEIs) acetylcholine ၏ပြိုကွဲပိတ်ဆို့။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဦး နှောက်ထဲတွင် acetylcholine ပိုမိုများပြားလာပြီးမှတ်ဥာဏ်အသစ်များဖြစ်ပေါ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
ChEIs (၄) ခုကို FDA ကခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော်စတုတ္ထမူးယစ်ဆေး၊ tacrine (Cognex) သည်စတုတ္ထမူးယစ်ဆေးဝါး၊ tacrine (Cognex) ကို ပိုမို၍ မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသောဆေးဝါးများဖြစ်သော Didpezil hydrochloride (Aricept)၊ အခြားသုံးထက်။ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကျွမ်းကျင်သူအများစုကဤဆေးသုံးမျိုး၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်ဟုမယုံကြည်ကြပါ။ လေ့လာမှုများအရဤဆေးများအပေါ်လူနာများ၏ရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်မှုသည်ခြောက်လမှ ၁၂ လအတွင်းကုန်းမြင့်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်းမလွှဲမရှောင်သာတိုးတက်မှုနှုန်းကိုထပ်မံပြုလုပ်သည်။
ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော ChEIs သုံးမျိုးအနက် rivastigmine နှင့် galantamine သည် FDA မှသာအသင့်အတင့်မှအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသောအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်အတည်ပြုပြီး၊ Didpezil ကိုမူပျော့ပျောင်း၊ rivastigmine နှင့် galantamine တို့သည်ပြင်းထန်သောအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတွင်လည်းထိရောက်မှုရှိ / မရှိကိုမသိရသေးသော်လည်း၎င်းတို့မလုပ်သင့်သည့်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိသည်။
ChEIs ၏အဓိကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းစနစ်ပါဝင်ပြီးပျို့အန်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ များသောအားဖြင့်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးပမာဏ၏အချိန်ကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သောအစားအစာဖြင့်ဆေးဝါးများကိုစီမံခြင်းတို့ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လူနာအများစုသည် ChEIs ၏ကုထုံးဆေးများကိုသည်းခံလိမ့်မည်။
အချိုမှုသည် ဦး နှောက်၏အဓိကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော neurotransmitter ဖြစ်သည်။ သီအိုရီတစ်ခုအရအချိုမှုန့်သည် ဦး နှောက်အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပြီးဆဲလ်များကိုပျက်စီးစေသည်။ Memantine (Namenda) သည်အာရုံကြောဆဲလ်များကိုသက်ဝင်စေရန် glutamate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ လေ့လာမှုအရ memantine ရှိလူနာအချို့သည်သကြားဆေးများ (placebos) ရှိလူနာများထက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဂရုစိုက်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Memantine ကိုအလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုကုသရန်အတွက်ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ဆေးများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတိုးပွားလာခြင်းတို့ကြောင့်ထိရောက်သောဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ AchEs နှင့် memantine နှစ်မျိုးလုံးဖြင့်လူနာများကိုလည်းကုသနိုင်သည်။
ထို့အပြင်လေ့လာမှုများစွာအရ J147, CAD-31, CMS 121 စသည်တို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် Alzheimer ရောဂါအတွက်မြန်ဆန်သောအိုမင်းမှုပုံစံတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ J147 သည်စမ်းသပ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှုန်းမြင့်မားသောမောက်မော်ဒယ်လ်များတွင်အိုမင်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ နှင့်လူ့ ဦး နှောက်အာရုံကြောရှေ့ဆဲလ်များတွင် J147 ကျော်တိုးမြှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု CAD-31 ကိုခေါ်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျရှိပါတယ်။
စာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ ကစားနည်းများကစားခြင်း၊ စကားလုံးပဟေcompletိများကိုအပြီးသတ်ခြင်း၊ တေးဂီတတူရိယာများကစားခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းတို့ကဲ့သို့အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်အန္တရာယ်နည်းပါးသည်။
Matthews, KA, Xu, W. , Gaglioti, AH, Holt, JB, Croft, JB, Mack,,, & McGuire, LC (2018) ။ လူမျိုးရေးနှင့်လူမျိုးရေးခန့်မှန်းချက်အရအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆက်စပ်သောစိတ်ဖောက်ပြန်မှု (၂၀၁၅-၂၀၆၀) အရွယ်ရောက်ပြီးသောအသက် ၆၅ နှစ်အရွယ်များတွင်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှု။ https://doi.org/2015/j.jalz.2060external icon
Xu J၊ Kochanek KD, Sherry L, Murphy BS, Tejada-Vera B. သေဆုံးမှု - ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက်နောက်ဆုံးအချက်အလက်များ။ အမျိုးသားရေးအရေးပါသောစာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာများ၊ vol ။ 2007 မရှိ။ 58. Hyattsville, MD - ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်တာ။ ၂၀၁၀
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ - အကြောင်းရင်းများ (NHS)
Patterson C၊ Feightner JW၊ Garcia A၊ Hsiung GY, MacKnight C, Sadovnick အေဒီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈) ။ "စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ ၁။ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏အဓိကကြိုတင်ကာကွယ်ရေး" ။ CMAJ ။ 2008 (1): 178-5
McGuinness B, Craig: D, Bullock R, Malouf R, Passmore P (ဇူလိုင်လ ၂၀၁၄) ။ "စိတ်ဖောက်ပြန်၏ကုသမှုများအတွက် statins" ။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ Cochrane ဒေတာဘေ့စ
Stern ပာ Y ကို (ဇူလိုင်လ 2006) ။ "သိမြင်မှုအရံနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ" ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများ။ 20 (3 ပျော့ပျောင်း 2): S69-74
"အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုပစ်မှတ်ထားသောစမ်းသပ်ဆေးသည်အိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောသက်ရောက်မှုများပြသသည်" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်) Salk Institute ။ 12 နိုဝင်ဘာ 2015. နိုဝင်ဘာလ 13, 2015 ရယူရန်
ပင်မစာမျက်နှာ ဘ‌‌လော့ခ် ဆက်သွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ